MTJIBS NA-EME AKW BKWỌ AKW NEKWỌ KA Ọ B WITHR AG NA AGITO | NAB Gosi News | 2021 NAB Gosi Onye Mmekọ na Onye Mmepụta nke NAB Show LIVE. Akụkọ Mgbasa Ozi Mgbasa
Home » Apụta » MTJIBS NA-EGBU AGBAGBUGHEF KWES PR WITH KWES WITHR WITH NA AGITO
Lalọ ọrụ na-akwado igwefoto Fort Lauderdale na-ejikwa ịkekọrịta mmekọrịta mmadụ na nka na ụdị
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ abụọ, Michael Taylor, onye nwe MTJIBS - Fort Lauderdale, ụlọ ọrụ na-akwado igwefoto Florida, chọrọ ịgbasawanye ụlọ ọrụ nke ụlọ ọrụ nke ngwọta ha nwere ike ịnye ndị ahịa ha. Mana n'oge ahụ, ọ nweghị ike chọta usoro kwesịrị ekwesị itinye ego na nke ahụ ga-adaba na nnukwu mkpa ụlọ ọrụ ahụ. Mgbe ahụ ọ hụrụ MITI agaghị ekwe omume AGITO modular dolly system.
“Anọ m na-achọ dolly na-arụ ọrụ nke a pụrụ ịtụkwasị obi na ebe ngosi ihe nkiri,” ka Taylor kọwara. “Ahụrụ m ka AGITO na-arụ ọrụ, ọ masịrị m nke ukwuu. AGITO weputara otutu ihe ma na egwu ya - o nwere ike ime ihe niile anyi kwesiri ime na ihe ndi ozo. Ya mere, anyị nwetara ya. ”
AGITO bu uzo mbu nke uwa dịpụrụ adịpụ dolly. Nkee AGITO nwere otutu nhazi, na-ekwe ka mmeghari nwayọ site na nwayọ nwayọ, nke ziri ezi na-arụ ọrụ ọsọ ọsọ, niile n'ime otu ụzọ ngwangwa dị ukwuu. Site na ngbanwe dị mfe na ngwa ngwa nke ngwụcha draịva ya, AGITO nwere ike ahazi ya maka ọrụ na-agagharị n'efu na ọnọdụ Egwuregwu, ma ọ bụ mmegharị nkenke na rails na ọnọdụ Trax. Taylor mechara nweta usoro AGITO COMPLETE, nke na-enye iji ụgbọ okporo ígwè eme njem na iji ọtụtụ ebe, ya na AGITO Tower nke na-enye usoro 700mm nke mbuli.
Taylor kwuru, "N'ezie, ozugbo anyị natara AGITO, mmechi mgbasa ahụ malitere, mana nke ahụ mechara baara anyị uru dịka sistemụ ahụ bụ ikuku ma na-enye mmekọrịta mmadụ na ibe ya site na imewe." "Anyị ghọtara na anyị mere zuru okè zuo." Tinyere Xavier Mercado, MTJIBS ọkachamara igwefoto na onye ọrụ, ụlọ ọrụ ahụ malitere ịkwalite sistemụ ahụ.
Ọrụ mbụ maka MTJIBS ọhụrụ AGITO modular dolly system ga-abụ maka NASA na mbido May 30 nke SpaceX Crew Dragon Demo-2 - nnwale ule izizi nke ụgbọelu nke ugbo mmiri dragon na nke mbụ ebufere oghere si na United States pụta kemgbe ikpeazụ Space Shuttle mission, STS-135, na 2011. Ọrụ ahụ sitere na ntinye aka site na Motion agaghị ekwe omume mgbe ụlọ ọrụ ahụ kpọtụrụ ndị NASA, ebe MTJIBS dị nanị 200 kilomita site na Kennedy Space Center. MTJIBS ga-ahụ maka ijide oge ọdịnala nke ndị ọrụ na-abanye n'ụgbọ njem ha mgbe ha si na Neil Armstrong na-arụ ọrụ na ndenye ọpụpụ (nke a na-akpọbu Manned Spacecraft Operations Building) ma na-ese foto. Ọpụpụ na-abanye n'ụgbọ njem na-ebugharị bụ agba mara n'ụwa niile, gbasara oge Gemini, Apollo, Skylab na Space Shuttle. Mana oge a, NASA chọrọ ime ihe dị egwu karịa igwefoto igwefoto.
(The gbaa nwere ike hụrụ ebe a www.youtube.com/watch?v=vAtCOwgSiEo)
Dabere na Mercado, usoro AGITO bụ akụkụ kachasị ngwa ngwa ha wuo. Nzukọ nke ụgbọala ahụ na-agwụ, ụlọ elu ahụ, na eriri ndị ahụ na-agba ọsọ ọsọ. Usoro ikuku ikuku na-arụ ọrụ nke ọma ma sie ike n'oge niile. Agbanyeghi na otu onye nwere ike rụọ ọrụ AGITO, Taylor na Mercado jikwa sistemụ were Taylor rụọ igwefoto isi igwe ma Mercado na-ejikwa AGITO. "Na mmadụ abụọ, ọrụ na-aga nke ọma, mana AGITO dịkwa ka ezigbo mgbe otu onye na-eji ụkwụ na-arụ ọrụ," ka Mercado kwuru.
Ihe omume MTJIBS na-esote ga-abụ mmemme mmemme dị iche iche. Ọ bụ ezie na ụlọ ọrụ ahụ na-enye ọrụ maka Telemundo na Univision maka ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 20, mmemme ọ bụla chọrọ MTJIBS na-enye nkwupụta maka ọrụ ha dị ka ndị na-emepụta ihe na-achọkarị ụzọ okike iji jide ihe ngosi ha.
Ndị a gụnyere Billboard Latin Music Awards 2020 maka Telemundo na 21st Annual Latin GRAMMY® onyinye na Onyinye Ndị Ntorobịa (Ntorobịa ntorobịa) 2020 maka Univision.
"Onyinye Ndị Ntorobịa nwere ezigbo ihe ịga nke ọma ka anyị jikọtara AGITO na SHOTOVER G1 gyro-stabilized gimbal, ”ka Taylor kwuru. “Mana AGITO naanị ya gbasiri ike karịa sistemụ ndị ọzọ, ọbụnadị n’enweghị isi kwụrụ ọtọ. Ndị isi hụrụ AGITO n'anya dịka ọ na-enye ha nnukwu mgbanwe mgbanwe okike yana ịhapụ mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Otu onye nduzi kọwara usoro ahụ dị ka 'kpakpando nke ihe nkiri ahụ' n'ihi na a na-ejikwa ya dị ka igwefoto isi, nke ahụ na-enye obi ụtọ ịnụ. ”
Mercado kwuru, sị: "Ndị nduzi na-enwekwu ihe ọ ga-eme iji kpachara anya COVID-19." Emebela usoro ọhụụ niile ebum n'uche iji chebe ndị nka na ndị nka, mana ọ ka ga-abụrịrị ihe ngosi na-atọ ụtọ ma na-ahụ anya. ”
Maka mmepụta Telemundo nke Billboard Latin Music Awards 2020, a haziri ntọala ahụ na nkebi anọ na usoro egwuregwu, yana onye na-eweta ihe dị n'etiti etiti, ka Mercado si kwuo. “AGITO zuru oke maka nhazi okirikiri a. Ọ nwere ike itinye aka maka ọkwa ọ bụla ma tụgharịa n'ime maka onye na-eweta ihe niile ma na-enwe anya dị anya. O mere ka ihe ngosi ahụ nwee nchekwa na ọganiihu. ”
"Mgbe ndị nwe anyị AGITO nwere ihe ịga nke ọma, anyị na-aga nke ọma," ka Rob Drewett, CEO na ngalaba-guzobere Motion agaghị ekwe omume. Inwe ike itughari MTJIBS na NASA ma hu otu ha siri jiri AGITO nyere ndi okike aka imeputa ihe bu ihe kpatara anyi jiri kee sistemu a. Ọ dị warara ma dị mkpụmkpụ karịa mọzụl ọdịnala ma na-ewepụta mmegharị nke ị gaghị enwe ike ịme mbụ. ”
N'oge na-adịbeghị anya, MTJIBS nọ na-ahụ nnukwu ihe xR - Extended Reality, nchikota nke Augmented na Mixed Reality - ọrụ mmepụta egwu.
Taylor anaghị ahụ mmepụta na-alaghachi n'ụzọ ndị ọrịa na-efe efe. “Anyị amụtala usoro ọhụụ na teknụzụ ọhụụ. O so n’ihe anyị ji zụta AGITO na nke mbụ. Ihe niile ga - aga n'ụzọ ahụ ma anyị akwadobela maka ọdịnihu. ”
"Anyị hụrụ ihe na-echere AGITO n'anya," ka Mercado kwuru. Motion agaghị ekwe omume na-emepe emepe teknụzụ ọhụụ maka ọdịnihu. Na nke anyị, ndị AGITO na-enyere aka itolite ụlọ ọrụ anyị ma mepee ahịa ọhụrụ. ”
Previous: Audinate na-enye Seminar maka imeghari Mmụta Egwu maka COVID na Dante N'oge NAMM 2021
Osote: Akwụkwọ Goldcrest na-agbakwunye Onye na-agba agba agba ochie Alex Berman